Echiche Ụgha nke Oedipus: Nchịkọta dị mkpirikpi - UniProyecta
Nọmba na French
Nọmba na Bekee
Nọmba na Chinese
Akụkọ ifo ndị Gris
Ọnụọgụ ndị Rom
Akwụkwọ Agba Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ
Akụkọ ifo nke Oedipus
N’oge ọchịchị chi ndị Olympia, ọ bụghị njem niile na njem dị egwu. E nwekwara ndị eze na -anwụ anwụ nke kara akụkọ ifo ndị Gris akara, ịbụ eze oedipus otu n'ime ha. Tupu ọ rute n'ocheeze, ọ bụ nwata nne na nna ya gbahapụrụ, n'agbanyeghị na mgbe ọtụtụ afọ gachara, ndụ chọtara ha ọzọ.
Ana m akpọ gị oku ka ị gụọ maka akụkọ dị egwu ebe eze na -enweghị ike ịgbanahụ akara aka ya, nke ekwuru site n'omume ọjọọ site na mgbe amụrụ ya. Edebela ịdị adị nke Oedipus na ọ mere dịka ha buru ụzọ hụ, na -etinye ụbọchị ikpeazụ ya na nhụsianya na mgbu miri emi.
Isiokwu Ndị Dị na Ya
1 Ole ndị bụ nne na nna Oedipus?
2 Kedu ka Oedipus si achọpụta eziokwu nke ndụ ya?
3 Olee otú amụma Oedipus si mezuo?
4 Ebe ikpeazụ nke Oedipus
Ole ndị bụ nne na nna Oedipus?
Nke a bụ akụkọ Oedipus, obere nwa nwa mmadụ abụọ: Layo na Jocasta. Ndị di a chọrọ ịhụ ọdịnihu ha ibu eboro delphi, dị ka ọ na -adịkarị na Gris oge ochie.
Okwu a ewetaghịrị ya ihe ọma maka nwa a na -amụbeghị amụ. Ọ gwara nne na nna ya na ọkpara ya ga-egbu ya ma lụọ nne ya, nke bụ ihe na-echegbu Laius nke ukwuu. Mgbe a mụrụ nwa ahụ, nna ya zigara enyi ya ka ọ pụọ, mana o nweghị obi igbu onwe ya. N’ihi ya, ọ kegidere ụkwụ ya n’elu osisi dị n’Ugwu Citeron.
Kara aka na -anwụ, ezigbo onye ọzụzụ atụrụ aha ya bụ Forbas hụrụ ya wee kpọrọ ya gakwuru nna ya ukwu Polibo, eze Kọrịnt. N'aka nke ya, ọ na -akpọgara nwunye ya ọ hụrụ n'anya, eze nwanyị Merope. N'ịbụ onye ọ masịrị n'omume ọmịiko nke di ya ọ hụrụ n'anya, o kpebiri ịnọnyere ya. Ha abụọ na -eku nwa dị ka nwa ha na ha na -akpọ ya oedipus, nke nye ha pụtara "ụkwụ fụrụ akpụ." Kemgbe ahụ ọ ghọrọ onye isi Kọrịnt.
Kedu ka Oedipus si achọpụta eziokwu nke ndụ ya?
Oedipus n'oge ọ na -eto eto lere anya nke ọma n'ịzụ ọzụzụ ndị agha. Ụmụ klas ha ndị ọzọ nweere ha anyaụfụ, ọ bụ ya mere ha ji gwa ha: "A kuchirila gị, nne na nna gị ahụghị gị n'anya." Oedipus, nke okwu ọjọọ ndị a wutere, jụrụ eze nwanyị eziokwu nke mmalite ya: “gwa m nne, ọ bụ eziokwu na ị bụghị nne m? Ole ndị bụ nne na nna m? " Nke Queen Merope na -ekwu mgbe niile na ọ bụ ya na ọ nweghị onye ọzọ.
Agbanyeghị, ọ ka nwere obi abụọ, oke ụjọ, kpebie ịga n'ime ọnụ okwu nchụaja nke Delphi ịnụ ụdị nke ya. N'ebe ahụ, ọ nụrụ ihe kacha nwute na ndụ ya: ọ bụghị nwa ndị eze Kọrịnt, nne na nna ya bụ ndị eze Thebes, ndị na -ahụghị ya n'anya n'ihi ihe ọjọọ ya mere. Echiche ya dị egwu, dị egwu. N'ihi ya, ọ tụrụ aro ka ọ ghara ịga Thebes. Mana Oedipus erubeghị isi, ọ gara Phocis ozugbo, site na mgbe ahụ ọdachi nke amụma ekwuputara malitere imezu.
Olee otú amụma Oedipus si mezuo?
Mgbagwoju anya Oedipus mere ka ọ mezuo ọdịnihu ya dị egwu na ihe arụ kacha mara ya ikpe. N'ịchọsi ike ka ọ kwụsị ịkpa agwa ya, ọ gaghị Kọrịnt mana ọ gara Thebes, ebe ha ga -emezu. Ka ọ na -aga, ọ zutere otu ụmụ nwoke ndị ọ kpochapụrụ maka na o kwenyere na ha ga -ebuso ya agha, otu n'ime ha bụ Eze Laịọs, nna ya n'ezie. Mana Oedipus amabeghị ma ọ ga -ewe ogologo oge ịchọpụta eziokwu.
Ka oge na -aga, nnukwu anụ ọjọọ nke ndị njem niile na -atụ egwu wakporo ya. Ọ raara onwe ya nye ịwakpo ndị njem ma ọ bụrụ na ha azaghị enigmas ya. Ọ bụ maka Sphinx, ihe e kere eke dị iche iche nwere ahụ nkịta, ọdụ agwọ, nku nnụnụ, aka nwanyị, mbọ ọdụm, ihu nwa agbọghọ, na olu nwoke. Mgbe Oedipus zutere ya n'okporo ụzọ ọ gwara ya ilu ahụ, nke ọ kọwara n'ụzọ ziri ezi. N'ihi ya, ọ gbasara ma ghara ịwakpo ya ọzọ.
Onye ọ bụla mere ememme mbibi Sphinx. Ha tụbara nnukwu oriri wee mee mmemme maka na ọ gaghị alụso onye ọzọ ọgụ ọzọ. Ọzọkwa, n'azụ ihe a niile, e nwere nkwa Creon, ọgọ nwoke nwanne Laọs nwụrụ anwụ. Ọ nyere aka nwanne ya nwanyị Jocasta na ọbụbụeze nye onye jisiri ike wetuo Sphinx. Nke a bụ ka amụma nke abụọ nke ime mmụọ ga-esi mezuo: ọkpara ga-alụ nne ya.
Ebe ikpeazụ nke Oedipus
Ozugbo ebibiri Sphinx na -akpọ asị, Oedipus na Jocasta lụrụ dịka nwanne ya nwoke nyere ya. N'oge ndụ ha, ha mụrụ ụmụ ma nwee ọ happyụ n'ezie n'ịchị Thebes. Ruo mgbe ọdachi batara na mpaghara ahụ. Ihe otiti dị egwu nke ọdachi wakporo udo na ọganihu nke ndị bi na ya, na -amanye ha ịgakwuru eze ha Oedipus ịchọ ngwọta.
Ndị amachibidoro iwu nke afọ niile na -eji laurel na alaka olive na -aga n'obí. Tinyere ha bụ onye nchụàjà Zeus, onye na -agwa Oedipus okwu n'aha ndị ya: "Thebes, nkụda mmụọ wutere ya, ọ nweghị ike iweli isi ya site na abis na -egbu egbu nke ọ mikpuru n'ime ya ...". Eze Oedipus na -ege ha ntị nke ọma wee lawa.
Ka ọ dịgodị, ọ na -abịa Creon nwere ozi sitere n'ọnụ ọnụ nke chi Apollo. Akụkọ a anaghị agba eze ume ma ọlị, ebe ọ bụ na achọpụtara na e gburu Eze Laịọs n'enweghi ikpe ziri ezi. Chi nyere iwu ka a taa ndị mere ya ahụhụ, n'agbanyeghị ndị ha bụ. Ozugbo emere ikpe ziri ezi, Thebes ga -alaghachi na nkịtị.
N'ịchọ ngwọta, eze nyere iwu ka akpọkọta ndị amamihe dịka: Corifeo, Corifeo, Tiresias, onye ozi mbụ nke Eze Polibo, onye bụbu onye ọzụzụ atụrụ nke Laius na ọbụna nwunye ya Yocasta.. N'ịge onye ọ bụla ntị, Oedipus na -adịghị mma ruru na nkwubi okwu na amụma ahụ dị oke egwu nke ime mmụọ, nke ọ gbapụrụ na ya nke ukwuu, emezuola.
Gịnị si na ya pụta? A chụpụrụ Oedipus na Thebes ya na ụmụ ya. Jocasta gburu onwe ya mgbe ọ hụrụ na ihe niile emeela. A mụrụ mba ahụ ọzọ ma ha ebiri ndụ nke ọma. Otu a ka ụbọchị ikpeazụ nke eze Oedipus si mechie, nwoke ọjọọ nwere akara ọjọọ kemgbe amụrụ ya ma kpagbuo ya oge niile ruo na njedebe nke ndụ ya.
Categories Akụkọ ifo ndị Gris Igodo bọtịnụ
Mma agha nke Damocles
Echiche Ụgha nke Odin
Inicio » omenala » Akụkọ ifo ndị Gris » Akụkọ ifo nke Oedipus
Nkebi ahịrịokwu ịhụnanya na Bekee
Akụkọ ifo nke Achilles na ikiri ụkwụ ya
Akụkọ ifo nke Persephone
UniProyecta bụ nke gị omenala na agụmakwụkwọ n'akụkụ free na ịntanetị. Mụta asụsụ ma mejuo ọchịchọ ịmata ihe gị na akụkọ gị.
P 2021 UniProyecta